03/11/2018 - Page 2 sur 3 -
Faradoboky ny fampielezan-kevitra : Hikorontana tanteraka ny fifamoivoizana
03/11/2018 admintriatra 0
Telo andro sisa dia hifarana ny fampielezan-kevitry ny fifidianana ho filoham-pirenena dingana voalohany, hanao izay fantany fa mety avokoa ireo kandidà rehetra. Noho izany dia samy hamoaka izay am-pelatanany tahaka ny fiara maro ireo kandidà, …Tohiny
Fanapahan’ny minisitry ny Fitsarana : Nampiaka-peo ny sendikàn’ny Mpitsara
Mihenjan-droa ny tady eo amin’ny minisitry ny Fitsarana, Harimisa Noro Vololona, sy ny eo anivon’ny sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara, na ny SMM. Raha toa ka namoaka ilay fanapahana mampiato vonjimaika an-dramatoa Fanirisoa Ernaivo amin’ny asany …Tohiny
Zaza 2 taona nisy nanolana : Hita faty tao anaty lava-drano
Novonoina sady naolana tamin’ny fomba feno habibiana. Hita tao anaty lava-drano tany amin’ny fokontany Ambohimalaza Ambony , distrikan’i Port Bergé ny vatana mangatsiakan’ny zazavavikely 2 taona sy tapany, ny harivan’ny alakamisy lasa teo tokony ho …Tohiny
Ho fiarovana ny vokatry fifidianana ho avy dia nandray fepetra ireo mpiara-miombon’antoka ao amin’ny fikambanana mpanara-maso fifidianana (Organisation de surveillance des élections na CSI-EMO) fa haka ny hevitr’ireo mpifidy aorian’ny latsa-bato. Araka ny fampiharana azy …Tohiny
Nampiavaka ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ny famelana malalaka ny mpiasam-panjakana handeha amin’ny nahim-pony. Tsy mba nanao toa ny fitondrana nifandimby, nampiditra ny politika tany anaty fitantanan-draharam-panjakana, izay namboly an’izany hoe Tim Fanabeazana, Tim Fahasalamana, Tim ...Tohiny